भद्रगोल बनेको ‘भव्य स्वागत’ ! | Hamro Khelkud
भद्रगोल बनेको ‘भव्य स्वागत’ !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली क्रिकेट टिम संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) विरुद्धको सिरिज जितेर सोमबार अपरान्ह नेपाल फर्कने कार्यक्रम थियो । टोली निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ घन्टापछि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रियो ।
टोली बाहिरिने बेलासम्म विमानस्थलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, खेलकुदका उच्च व्यक्तित्व, सयौंको हाराहारीका सञ्चारमाध्यम, नेपाली क्रिकेटका समर्थकको बाक्लो उपस्थिति रहँदा सुरक्षाकर्मीलाई भीडभाड तह लगाउन हम्मेहम्मे बनेको थियो । सबैजना टोली कतिबेला आइपुग्ला भन्ने कौतुहलता मै थिए ।
नेपालको जितमा विजयी जुलुस मनाउन व्यस्त
ऐतिहासिक सिरिज जितेको नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले रेड कार्पेट ओछ्याएर भव्य स्वागत गर्ने तयारी गर्यो । जुन खेलकुदमा पहिलोपटक गरिएको नयाँ प्रयोग हो । सञ्चारमाध्यमलाई आगमन कक्षको बाहिरको भाग र समर्थकहरुलाई आगमन कक्षको बाहिर रोडमै राख्ने गरिन्थ्यो । तर, सुरक्षाकर्मीले भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु त परैका कुरो को पत्रकार को समर्थक ठम्याउनै सकेनन् । सबैलाई भित्रै हुलिदिए ।
खेलाडीहरु आगमन कक्षबाट बाहिर निस्किए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना, सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, उपाध्यक्ष पिताम्वर तिम्सिना लगायत क्रिकेटका उच्च व्यक्तिहरुले खेलाडीहरुलाई खादा र फुलमाला लगाएर रेड कार्पेटमा हिडाए । जतिबेला सञ्चारमाध्यमहरु फोटो, भिडियोको लागि व्यस्त बन्दा आम समर्थक पनि मोबाइल तेर्साएर रेडकार्पेटमै पुगेर सेल्फी खिच्न भ्याए । संचारमाध्यमको नाम लिंदै समर्थकहरु भित्र पस्दा स्वागत कार्यक्रमको माहोल नै बिग्रिएको थियो ।
सुरक्षाकर्मीहरु खेलाडीको सुरक्षामा खटिनुभन्दा पनि उच्चपदस्थको सुरक्षामा नै व्यस्त भए । समर्थकले खेलाडीहरुलाई सेल्फी खिच्न तानातान गरिरहँदा सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक नै बने । राखेपले भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरेपनि भव्य स्वागत ‘भद्रगोल’ स्वागतमा परिणत भयो ।
खेलाडीलाई स्वागतका लागि रेड कार्पेट ओछ्याएर मात्रै पुग्दैन । उनीहरुलाई उत्तिकै सुरक्षा पनि दिनुपर्छ । तर, यसमा स्वागत गर्ने राखेप र सुरक्षा व्यवस्था चुक्यो । नेपालले यूएईविरुद्ध ३ खेलको ओडीआई र ३ खेलकै टी–२० आई समान २–१ ले जितेको थियो । नेपालले दुवैतर्फ पहिलो पटक सिरिज उपाधि हात पारेको हो ।